पत्नीको कुरा काटन् नसक्दा कांग्रेसलाई धोका, यसरी शुरुभयो मिलाउने प्रयास !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
पत्नीको कुरा काटन् नसक्दा कांग्रेसलाई धोका, यसरी शुरुभयो मिलाउने प्रयास !
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले आफूलाई मजबुद रुपमा उभ्याउने प्रयासको थालनी गरेको छ । प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा खुम्चिन पुगेको छ । त्यति मात्रै होइन कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि खुम्चिएको छ ।
कांग्रेसले आफूभित्रको विवाद अन्त्य गराउन सकेको छैन । पार्टीभित्रको गुट, उपगुटका कारण कांग्रेसलाई अहिले पनि समस्याले गाजेको छ । कांग्रेसभित्रका साना ठूला गुट अहिले पनि सलबलाइ रहेको एक नेताको भनाइ छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजु राणा, विमलेन्द्र निधि, डा।प्रकाश शरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीभन्दा अरुलाई विश्वास गर्दैनन् । आफ्नै गुटभित्र रहेका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा र नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले पनि देउवाको भूमिकाप्रति आशंका जनाउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार विश्वकर्मा र महरले बुढानिलकण्ठबाट असहयोग भएको भन्दै देउवा गुट छाड्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।
उता, आफूलाई नयाँ गुटको नेताका रुपमा केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थापित गर्दै गएका छन् । सिटौला केही हदसम्म सफल पनि भएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा रहेर सिटौलाले फाइदा लिइरहेको एक नेताले बताए । ‘रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिमा सिटौलाजीले हराउनु भयो । अहिले पौडेल समूहमा रहेर उहाँकै नेताहरू चोर्नु भएको छ । भातृसंगठनहरूमा कब्जा जमाइ रहनु भएको छ । सिटौलाजी आफ्नो उदेश्यमा सफल हुनु भएको छ’, कांग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सिटौलाले देउवा समूहबाट पनि नेताहरू ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छ ।’
सिटौलाले केन्द्रीय सदस्य डा।शेखर कोइरालालाई पनि आफ्नो गुटमा समेट्न सफल भएका छन् । डा: कोइरालाले सिटौलालाई नेताका रुपमा पहिचान दिएको स्रोतको भनाइ छ । सिटौला र डा।कोइरालाबीच पछिल्लो समय बाक्लै भेटवार्ताहरू हुन थालेका छन् ।
नेता सिटौलाले केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसीलाई पनि आफू मातहत राख्न सफल भएका छन् । सिंह र केसीले पनि सिटौलालाई नै फाइदा हुने गरेर छलफल केन्द्रित गर्ने गरेको बताइएको छ ।
सभापति देउवाले आफ्नी पत्नी आरजु राणा र सीमित नेताहरूको मात्रै कुरा सन्ने गरेका कारण कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी आरजु राणाकै कारण भएको देउवा समूहकै नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेसको पदाधिकारी बन्ने योजनाका साथ आरजु राणाले बुढानिलकण्ठबाट राजनीतिको शुरुवात गरेको आरोप छ ।
उता, देउवा समूहलाई खुइल्याउन सिटौला समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग विभिन्न आक्षेपहरू जोडेर प्रचार थालेको छ । सिटौला समूहको त्यो अभियानले कांग्रेसलाई फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा हुने नेताहरूको भनाइ छ ।
सिटौलालाई गगन थापा, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, प्रकाश रसाइली सहितका नेताहरूले साथ दिएको दाबी छ । राम्रा युवा नेताहरूले साथ दिएपछि सिटौला पनि खुसी छन् ।